SAS laghachi azụ azụmaahịa jiri ụgwọ ka mma
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » SAS laghachi azụ azụmaahịa jiri ụgwọ ka mma
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Denmark na -agbasa akụkọ • Akụkọ kacha ọhụrụ na Norway • Akụkọ na -agbasa ozi Sweden • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Nwere ike 3, 2019
SAS na ndị ọkwọ ụgbọ ha ruru nkwekọrịta. Ugboro ndị njem na Northern Europe nwere obi ụtọ ịhụ ụbọchị asaa ahụ ịpụ.
Koga ezumike ụbọchị asaa ahụ mere ka ihe karịrị abụọ n’ime ụzọ atọ ọpụpụ kwụsịrị. Ihe karịrị ụgbọ elu 4,000 arụghị ọrụ ndị njem 350,000. Nsogbu gụnyere ọrụ niile na-ewe ogologo oge na ọtụtụ ụzọ ahịa dị elu n'etiti nnukwu ogige Scandinavia.
Agbanyeghị, a ga-atụ anya ụfọdụ mmekpa ahụ na Fraịde ka ụgbọ elu na ndị ọrụ gafere mpaghara ahụ.
N'uhuruchi Thursday, SAS kwadoro njedebe nke iku abụ na ogbako ogbako mgbe ọ fọrọ nke nta ka ụbọchị abụọ nke ntụgharị uche kpụ ọkụ n'ọnụ.
Nkwekorita a nyere ndị na-anya ụgbọelu ụgwọ ọnwa 3.5 pacenti na 2019, pacenti atọ na 3 na pacenti anọ na 2020. Onye isi ọrụ SAS Rickard Gustafson kọwakwara na enyere ohere maka mgbanwe amụma na mgbanwe.
Ndị ọkwọ ụgbọ elu rịọrọ ka ha kwụọ ụgwọ ọnwa 13 ka ha wee soro ndị ụgbọ elu ndị ọzọ nwee asọmpi.
Ego ndị furu efu ga-efu SAS ihe karịrị $ 50 nde. Linegbọ elu ahụ nwetara uru na 2018 mgbe ọtụtụ afọ siri ike, na-ezere enweghị ego na 2012.
Royal Caribbean Group kpọrọ aha ọhụrụ Chief Environmental ...